Chirungu kune Vapoteri, maAsylees, SIV, uye Vakakuvadzwa Mukutengesa - Bilingual Dzidzo Institute
Chirungu kune Vapoteri, maAsylees, SIV, uye Vakakuvadzwa Mukutengeswa
NezveBEI RSS Dhipatimendi
Hapana-Mutengo Makirasi kune Vanokodzera Vadzidzi
Rutsigiro rweMitauro (Spanish, Arabic, French, Farsi, Pashto, Swahili, Turkish)
Tsigiro Services Inowanikwa
Referral Rubatsiro kune vatinoshanda navo
Refuge department Dzekubatanidzwa
Bilingual Education Institute (BEI) yanga ichishandira vapoteri uye vadzidzi vanobva kune dzimwe nyika kwemakore makumi mana. Mukati memakore makumi matatu apfuura, BEI yakapa makirasi eESL kuzviuru zvevatsva vanobva kune dzimwe nyika, vapoteri, vapoteri, vasungwa vekutengesa, uye vashanyi vanobva kunze kwenyika vanomiririra mazinga ese emagariro, dzidzo, madzinza, uye ehupfumi. BEI inopa dzidziso yemhando yepamusoro kuvadzidzi vedu, ichivakurudzira kuti vabudirire muzvidzidzo, bhizinesi, uye munharaunda dzepasirese uye dzemuno. Zvakabudirira munzvimbo idzi zvinogonesa vadzidzi vedu mukudzidza mutauro uye kuvagonesa kuratidza kufambira mberi mukugona mutauro wavo. BEI ine ruzivo mukudzidzisa Chirungu mune dzakasiyana siyana: Basic Literacy, ESL, Intensive English Chirongwa, Job Readiness, uye Workplace ESL kusanganisira asi isina kuganhurirwa kune chengetedzo uye zvine chekuita nebasa kutaura nemakosi emazwi. Makirasi edu ane chekuita nebasa akashanda nemhando dzakasiyana-siyana dzemaindasitiri: sevhisi yechikafu, maresitorendi, uye mahotera, kugadzira, uye kudziyisa uye kutonhora kwekudzivirira. BEI chikamu cheHouston Refugee Consortium yevapoteri vanopa rubatsiro vanga vachishanda mumubatanidzwa kwemakore gumi nemashanu apfuura. Mubatanidzwa wemasangano ari kugovera mari yeHurumende yakaita seRSS, TAG, neTAD mukuyedza kupa mabasa akanyatsoshanda uye akazara kune vapoteri vakagariswa patsva muHouston. Kwemakore gumi apfuura, BEI yanga iri yekutanga kondirakiti kune ese maRSS Education Services Zvirongwa uye ine ruzivo rwakakura mukudzidziswa, kubvunza, uye kutarisa kutevedza kwehurongwa uye kwemari kuti ive nechokwadi chekubudirira kwezvirongwa zvekudyidzana.
Muna 1988, BEI yaive chimwe chezvikoro zvishoma zvakazvimiririra muTexas zvakapihwa mvumo neUS Immigration and Naturalization Service kudzidzisa Chirungu neCivics kune vachangobva kunyoreswa zviri pamutemo vabvakure vakagamuchira ruregerero munharaunda yeHouston. Muna 1991, BEI yakava consortium subcontractor neHouston Community College System ichipa ESL (level 1, 2 & 3) inotsigirwa neNational Literacy Act (NLA) ye1991, PL 102-73. Muna 1992, BEI yakapihwa rubatsiro neGavhuna's Campaign against Employment Discrimination, iyo BEI yakagamuchira rukudzo rwakatanhamara kubva kuna Gavhuna nekuda kwemabasa akapihwa. Kubva 1995 kusvika 1997, BEI yakapa vadzidzi, vazhinji vacho vaive vapoteri, Bilingual Office Administration Training. Chirongwa ichi chakatsigirwa neJTPA Title II-A, II-C/ Houston Works. Muna 1996, BEI yakagamuchira rubatsiro rweTexas Citizenship Initiative (Citizenship Outreach) kubva kuTDHS, Hofisi yeImigration uye Refugee Affairs. BEI yanga ichipa zvidzidzo zvehuwandu hwevapoteri muHarris County kubvira 1991, kuburikidza neRSS, TAG, uye TAD rubatsiro kubva kuTDHS, nhasi inozivikanwa seHHSC.